वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनेको संख्या... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो
वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरुको मृत्यु हुने क्रम यसपालि पनि बढेको छ। विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाहरू विभिन्न कारणले मृत्युको शिकार हुने अवस्था वर्षै पिच्छे बढेको देखिन्छ।
यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र विदेशबाट बाकसमा फर्किने शव संख्या पाँच सय चार भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। ति मध्ये ४ सय ८९ पुरुषको र १५ शव महिलाका छन्।
उक्त सर्वेक्षणका अनुसार महिनामा औसत ६३ वटा शव भित्रिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १८ महिला र ७ सय ३८ पुरुषको गरी कुल ७ सय ५६ शव भित्रिएको थियो। ०७४/७५ मा यो संख्या बढेर ८ सय २१ पुग्यो। ती मध्ये महिलाको २० र पुरुषको ८०१ थिए।
मृत्यु हुनेको संख्या मात्रै नभई बिरामी, अपाङ्ग तथा अंगभंग भई फर्किनेको संख्या समेत बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
०७३/७४ मा २०४ नेपाली कामदार बिरामी तथा अपाङ्ग भई फर्किएका थिए। ०७४/७५ मा यो संख्या बढेर ३ सय ६१ पुग्यो। यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ सय ७४ नेपाली कामदार बिरामी तथा अंगभंग भई फर्किएका छन्। फागुन मसान्तसम्म कुल ४५ लाख ४० हजार ९०६ नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटे पनि मृत्यु भई आउने तथा बिरामी र अंगभंग भई फर्किनेको संख्या बढ्नुले वैदेशिक रोजगार अझै सुरक्षित नभएको संकेत गर्दछ।
सिप नसिकेर अदक्ष रुपमा बाहिरिने नेपाली कामदारको संख्या उच्च हुनुले पनि जोखिम बढाएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। ‘तालिम र सिप नलिइकन जाने प्रबृत्तिका कारण पनि जोखिम बढेको हो’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका सदस्य कुन्छा दोर्जे दिमदोङले भने।
संस्थागत रुपमा जानेभन्दा व्यक्तिगत तवरले जानेहरुका कारण पनि समस्या थपिएको उनको आरोप छ। संस्थागत रुपमा जानेलाई आफूहरुले समेत कामका बारेमा धेरै कुरा सिकाउने गरेको उनले दावी गरे।
मानसिक तनावका कारण कतिपयले उतै आत्महत्या गर्ने तथा कतिपयलाई मौसमको प्रतिकुलताका कारण पनि असर पर्दा बिरामी हुने वा ज्यान जाने गरेको आकृति रिक्र्युमेन्टका संचालक समेत रहेका दिमदोङले बताए।
डिप्रेसनमा काम गर्दा हुने दुर्घटनाले समेत जोखिम बढेको उनको तर्क छ।
आफूले गर्ने कामबारे तालिम तथा सिप लिएर र मौसम तथा अन्य जोखिमबारे राम्ररी बुझेर मात्रै विदेश जान उनी सुझाव दिन्छन्। ‘बिचौलियाको प्रभाव र व्यक्तिगत तवरले जोखिमपूर्ण मानिएका देशहरुमा तेस्रो मुलुक हुँदै जाने प्रबृत्तिले यस्तो समस्या बढाएको हो’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये अधिकांश कामदार अदक्ष रहने गरेको तथ्यांकले नै देखाउँछ। विभागको तथ्यांकअनुसार अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १. ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४. ५ प्रतिशत छ।
संस्थागत रुपमा जानका लागि ११० वटा देशहरुमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ। यद्यपी व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान भने १६७ मुलुकहरु खुला गरिएका छन्। यद्यपी कामका लागि मलेसियामा सबैभन्दा धेरै नेपाली पुगेका छन्।
विदेसिएकामध्ये फागुनसम्म मलेसियामा ३०. १ प्रतिशत, कतारमा २७. ४, साउदी अरबमा २०. २ र दुबईको हिस्सा १३. १ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वर्षेनि मुलुकमा ५ लाख नेपाली श्रम शक्तिका रुपमा उदाउने गरेका छन्। उदाउने श्रम शक्ति स्वदेशमै परिचालन हुन नसक्दा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ। यद्यपी विदेसिनको संख्या पछिल्लो पटक घट्दै गएको छ। यस आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामाभन्दा ३९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६, १९:२७:००